Qaxootiga Soomaaliyeed ee Botswana oo Xadgudubyo Lagu Hayo | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home BOGGA HORE Qaxootiga Soomaaliyeed ee Botswana oo Xadgudubyo Lagu Hayo
Qaxootiga Soomaaliyeed ee Botswana oo Xadgudubyo Lagu Hayo
Qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool dalka Botswana ayaa sheegaya in muddooyinkii u dambeeyay lagu hayay tacadiyo iyo xadgudubyo ka dhan ah oo ay u gaystaan laamanaha amniga dalkaas.
Wargeyska Xaqiiqa Times oo telefoonka kula hadlay madax ka tirsan jaaliyadda Soomaaliyeed ee Botswana iyo dhibbanayaal sheeganaya in lagu xadgudbay ayaa u kuurgalay qataraha ay ku nool yihiin ku dhawaad 250 qofood oo qaxooti ahaan looga qaabilay dalkaasi.
Faysal Bashiir waa dhibane haysta aqoonsi qaxooti. Dalkaasi wuxuu tagay 15 sano kahor isaga oo 9 jir ah. Balse taasi kama caawin in uu si xorriyad ah ugu noolaado dalka uu qaxootiga ku yahay. 17kii bishii hore ayaa laga qabtay meel suuq ah, kadibna waxaa loo dhaadhiciyay xabsi ku yaalla magaalada Francistown oo ah caasimadda labaad ee Botswana.
“ Markii xabsiga la i dhigay waxaa igu kacay xanuunka dhiig karka oo aan hore u qabay waayo duruufaha qallafsan ee xabsi yaalla ma aha wax qof bani aadam ah ay naftiisa ku qanci karto. Waxaan ku dhawaaday xaalad geeri u dhaw. Markii ay ciidanka dareemeen in nafteyda ay khatar ku jirto ayay aniga oo katiinadeysan iila ordeen Isbitaal.” Ayuu yiri Faysal oo Xaqiiqa Times xiriir telefoon lasoo sameeyay.
Faysal haatan waxa lagu dabiibaa Isbitaal ku yaallamagaalada Francistown. Waxaase nasiib darra ah in uusan waxba qabsan karin oo uu lugaha ka fariistay. Waxaa waxyeello gaartay qeybo kamid ah neerfaha qaarka dmabe ee jirkiisa. Hadda waxa uu ku boodaa biro.
Faysal aabihiis oo aan isaga telefoonka ku wareystay ayaa ii sheegay in muddo 15 sano ah ay isaga iyo qoyskiisa ku noolaayeen dalkan, balse sanadahan dambe ay galeen nolol aad u liidata oo fool xun.
Waxa uu hadalkiisa isaga oo sii wata igu yiri “Nalooma ogola inaan dalka isaga baxno, nalooma ogola inaan xamaalanno, mana la ogola inaan si sharaf leh dalkan ugu noolaanno. Qaxootinimadeenna ma aha mid nalagu xushmeeyo.”
Nin kamid ah guddiga Jaaliyadda balse iga codsaday inaan magaciisa qariyo ayaa ii sheegay in dhawr jeer oo hore jaraa’idka lagu soo qoray in Soomaalida la iska ilaaliyo maadaama a argagixiso yihiin. Taasi waxay kalliftay ayuu yiri masuulkan in xitaa muwaadiniinta dalkan ay na faquuqaan oo naloo arko dad mar walba shirqool maleegaya.
“Dhibka na haysta waxaan u gudbinnay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, oo aan aniga si fool ka fool ah isugu aragnay Koonfur Afrika mar uu bishii hore shir uga qeybgalayay. Wuxuu iisheegay in wax laga qaban doono arrintan. Ilaa iyo hadda kama hayno wax xiriir ah ama jawaab ah. Waxaan codsanaynaa in Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo madaxda Soomaaliyeed oo dhan ay arrintan u guntadaan oo ciqaabtan aan ku jirno nalaga soo gaaro.”
Dhibaatada haysta dadka Soomaaliyeed intaa kuma eka. Waxaa jira kuwa badan oo ka ganacsada, hantina ku leh dalkaasi. Waxay ii sheegeen in dowladdu ka mamnuucday in ay ganacsadaan waliba iyaga oo sharciyo iyo shatiyo ganacsi haysta.
Nin iigu soo koobay magaciisa Cali sababo amni darteed ayaa ii sheegay in xitaa sharcigii qaxootinimada ee ay siisay UNHCR uusan shaqeynin. “Xurriyada shaqada iyo midda socodka waa naloo diiday. Aniga waxaa la iga saxiixay inaana xerada qaxootiga ka dhex bixi karin oo aan halkaas maxbuus ku ahaado. Intaa waxaa dheer xerada gudaheeda kuma haysto daryeel.” Ayuu yiri Cali.
Haatan waxaa xabsiyada dalkaas ku jiro muddo 14 bilood ah 4 wiil oo Soomaali ah kuwaas oo loo diiday magangalyadii ay ka dalbadeen Botswana, lagana hor istaagay gacantii ay u fidin lahaayeen hay’adaha u dooda xuquuqda qaxootiga ee dalkaasi.
Dowladda Soomaaliya iyo hay’adaha ay arrintan khuseyso waxaa habboon in ay arrintan wax ka qabtaan oo ay xiriir la sameeyaan dowladda Botswana si dadkaas meesha looga soo qaado ama ay ugu noolaadaan si xor leh. Waxaa jiro caga jugleyn iyo handadaad joogta ah oo lagu hayo qaxootiga Soomaaliyeed ee Botswana. Waa howl u taalla xukuumadda Ra’iisul Wasaare Cumar C/rashiid in ay si degdeg ah uga jawaabto.
Faysal Bashiir oo isaga oo katiinadeysan yaalla Isbitaal
Faysal Birahaas ayuu ku boodaa
Previous articleCaqabada Horyaalla Madaxweynaha Cusub ee Galmudug
Next articleTaariikhda Jaamac Cabdullaahi Qaalib